Bavele enkantolo abafundi bekolishi | News24
Bavele enkantolo abafundi bekolishi
ABAFUNDI aba ngamashumi amabili (20) ababoshwa ngesonto eledlule emva kokuthi bebhikishe kugcine sekushiswe nedlu yonogada eGamalakhe TVET, bavele enkantolo yaseRamsgate ngoLwesine.
Okhulumela amaphoyisa uKapteni Gerald Mfeka uthe icala labafundi lahlehliswa kwathi abanye babafundi baphuma ngebeyili ka R500 umuntu emunye. Abanye abangakwazanga ukukhokha ibeyili bathathwa bayovalelwa ejele lase Westville.
Uthe abafundi bazovela enkantolo okwesibili ngomhlaka zingama-29 kuyona lenyanga.
Okunye okuvezwe uMfeka ukuthi laba fundi bazobhala izivivinyo kuleli sonto. Uthe amaphoyisa ahlele ukuthi azoqapha isimo ekolishi ngesikhathi abafundi bebhala